IVirgo Tiger: Umhlobo onenceba weTshayina Western Zodiac - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana IVirgo Tiger: Umhlobo onenceba weTshayina Western Zodiac
Nabani na ozalwe phakathi kuka-Agasti 23 noSeptemba 22 uyiVirgo.
Iminyaka yeTiger yile: 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022.
Aba bantu bahlala beceba ikamva.
Inomdla kwaye ichaza, umfazi weVirgo Tiger uzenza ukuba athethe ngokukhawuleza.
Indoda yeVirgo Tiger inobungane kakhulu kwaye iyakhathala.
Abo bazalwe phantsi komqondiso weVirgo kunyaka wamaTshayina weTiger baya kuphuhlisa umlinganiso odibanisa amandla kunye nethamsanqa leTiger kunye nokuchwayita kodwa uhlobo lwendlela yeVirgo.
Amabhongo aba bantu ngokuqinisekileyo aya kubasusa kude ebomini, nangona bekwanamaxesha okuphelelwa lithemba kunye nokungazinzi ngokweemvakalelo.
I-Spirited Virgo Tiger Ubuntu
Ngobubele, abantu baseVirgo Tiger bazele ukukhuthazwa kwaye abanako ukuthotywa nantoni na, ngakumbi ukuba bayathandwa kwaye baziva bonwabile.
Abo bazalelwe uphawu lweenkwenkwezi lwaseNtshona uVirgo kunyaka wamaTshayina weTiger ngabantu abanoxanduva kakhulu abaya kuyenza imisebenzi yabo ngokwenkolo.
Akukho nto injengomsebenzi onobuqili kubo, baya kuba nakho ukoyisa nawuphi na umqobo kuyo nantoni na abanokuyenza ukuba nje kukho ukuzimisela ukuyenza loo nto.
Unetalente kwaye unovakalelo, iVirgo Tigers ayinangxaki yokufumana uncedo kubantu ababathandayo.
Banobubele kwaye banomonde, kwaye ngelixa banendlela ekhululekileyo yokusondela ebomini, banokufumana uvakalelo kunye nokukhathalela xa izinto zibalulekile.
Umsebenzi ogqibeleleyo kubo uya kuba yinto efuna ukuba abasebenzi babe nengqondo yokuhlekisa kunye nomonde omninzi.
Oogxa babo baya kuthanda nje ukusebenza ecaleni kweVirgo Tigers kuba bathembekile kwaye bayonwabisa. Bayalazi ixesha lokuthetha ihlaya elifanelekileyo kunye nendlela yokugcina wonwabile wonke umntu.
Imisebenzi egqibeleleyo yeVirgo Tiger: Imfundo, ikhemesti, iAccounting, iSayensi.
Luququzelelwe, olu hlobo lweeVirgos luthanda ukujongana nento nganye nganye. Abangxami kwaye bayayazi indlela yokugcina ubomi babo bomsebenzi kunye nobomi basekhaya ngokulinganayo.
Banesakhono sokufunda abantu, ke baya kwazi ukuba basebenzisane nabani xa besenza ishishini.
leo mfazi kubudlelwane
Awunakho ukutshintsha iVirgo Tiger ekubeni ithathele ingqalelo ishedyuli yayo. Kufuneka bazi yonke into malunga nento abaza kuyenza, nabani, nini.
Baya kuba nexesha lokukhulula kuphela ukuba uxanduva lwabo luye lwenziwa. Obunye bobuthathaka babo kukuba xa bengakwazi ukufikelela kwimpumelelo yomsebenzi abalandelayo, banotyekelo lokuzenzela ilizwe lamaphupha, apho bayakulahleka khona xa izinto zihamba kakubi.
Aba bantu bane-ajenda epheleleyo kwaye bahlala becwangcisa ikamva. Bayanyamezelana, kodwa xa kukho into engena phakathi kwabo kunye nezicwangciso zabo ziba ngqongqo kwaye zilungiswe.
Ukuba kwenzeka into embi, baya kuvuma ityala nokuba ayilotyala labo. Aba bantu ngabacebisi abahle kakhulu njengoko bekwazi ukufunda iingqondo zabantu.
Iimpawu eziPhezulu: unesibindi, uhlalutyo, unetalente kwaye ulungisiwe.
IiVirgo Tigers zinamandla kodwa zinobuthathaka xa kuziwa ekumiseni isingqisho sazo. Abakwazi nje ukuzikhawulezisa.
Bafuna ukulala ngokwaneleyo ukuze bazalise iibhetri zabo. Xa belala kancinane kunesiqhelo, bayonwaba kwaye bangagxininisi.
Awusoze ubone iVirgo Tiger itshintsha isitayile sayo kwifashoni. Okanye imikhwa yabo yokutya.
Uninzi lweeVirgo Tigers ziya kuva ubunzima kwi-OCD njengoko zihlala zizama ukunamathela kwimithetho yazo nakwindlela yazo. Kuphela emva kokuba bekhulile bayaqonda ukuba ubomi abukho konke malunga nokulawula yonke into.
Ngokuya kubudlelwane, iiVirgo Tiger zithandana, ziyamangalisa, zinembeko, zinothando kwaye zinobubele.
Banentlonipho kwiqabane kunye nobudlelwane kwaye balindele into efanayo kwesiqingatha esinye. Bayakuthathela ingqalelo yonke iminqweno neemfuno zamaqabane abo, kwaye baya kuba nomona kuphela xa benesizathu.
Wazalelwa kwi-zodiac yamaTshayina ka-1977
Ukunyaniseka nokuvuleleka zizinto ezimbini eziphambili xa benomntu.
IiVirgos ezizalwe ngonyaka weTiger ziya kusebenza kunye neqabane ukwenza ubudlelwane bufezeke. Musa ukungcatsha okanye uza kuziva uziphindezele.
Abakhangeli ukuthandwa, aba bantu baninzi emva kwembeko kunye nokuqala kumntu abathandana naye.
Bayathanda ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi yekhaya kwaye bakhetha ukugcina ubudlelwane ngaphandle kwekhaya. Akunqabile ukuba uye kwindlu yendlu ebanjwe yiVirgo Tiger.
Xa bekhathazekile, abayi kuyifihla indlela abavakalelwa ngayo kwiqabane. Bayakuthetha okusengqondweni yabo kwaye bayathemba ukuba omnye uza kulungela into ebebeyicebisile.
Ukuba uyonqena okanye uqheleke kakhulu, iiVirgo Tigers aziyi kuba nomdla kuwe. Bathanda abantu abakhutheleyo abathi ngamanye amaxesha bafune ukwenza izinto eziphambeneyo.
Eyona iyahambelana: I-Capricorn Horse, Inja yeScorpio, ihagu yomhlaza kunye nenja yomhlaza.
IVirgo Tiger Iimpawu zoMfazi
Ubundlobongela ngamazwi, umfazi weVirgo Tiger uya kuzama ukuxoxa nasiphi na isifundo ekuxoxwa ngaso.
uyenza njani indoda ye-scorpio ikufune ubuye
Kuluyolo kuye ukuba yinxalenye yengxabano. Ungaqala ingxoxo malunga namalungelo kwaye uya kuba phezu kwakho ngeengxabano.
Uyakuthanda ukuhamba kwaye uhlala etshintsha apho ahlala khona. Ukuya kwiindawo ezonwabisayo kunye nolwaneliseko.
Eli nenekazi lithanda ukuba nendawo yalo. Uya kuzilwela izinto zakhe kwaye uyayazi indlela yokubeka iinjongo ngokuchanekileyo. Iimpawu zayo eziphambili kukunyamezela, ukomelela kunye nokukwazi ukwenza izigqibo ngokukhawuleza.
Unokuba ngumkhohlisi njengoko eziphatha ngokungakhathali. Abafazi beVirgo Tiger baxabisa ubudlelwane babo kunye namaqabane. Baya kuba nokuzikhusela ngokugqithiseleyo xa bebandakanyeka, into enokukhathaza iqabane.
Ukuba ufuna ukonwaba, umfazi kule miqondiso kufuneka avavanye oko akwenzayo rhoqo. Kuya kufuneka nokuba afunde indlela yokwamkela xa engalunganga.
Ukuba ngokomoya ngakumbi kuya kumnceda ukuba aseke iinjongo ezintsha. Ukuba uthatha eli cebiso, umfazi weVirgo Tiger uya kuba ngcono kubudlelwane nabanye.
Abantu abadumileyo phantsi komqondiso weVirgo Tiger: uEmmy Rossum, uJenna Marble, uJimmy Fallon, uPhil McGraw, uLindsey Stirling.
IVirgo Tiger Iimpawu zomntu
Yoqobo kunye nokungaqhelekanga, indoda yeVirgo Tiger iya kutsala abantu naphina apho iya khona. Uyayazi indlela yokufezekisa iinjongo zakhe kunye nokwenza izicwangciso. Unendlela ecothayo kodwa ethe chu yokuqhubela phambili.
uphawu lweZodiac ngoMatshi 8
Akukho nto ngaphandle kothando enokumnqanda ekubeni afumane le nto ayifunayo. Le ndoda ilungile inqanaba lokungazi. Uthanda ukuxoxa ngefilosofi kunye neendaba zamva nje. Uqinisekile kwaye unamandla.
Inkani yakhe iluncedo xa efuna ukufezekisa into. Unamathela ebantwini nakwiindawo kwaye unabahlobo abaninzi njengoko eyazi indlela yokunxibelelana ngokufanelekileyo.
Nangona kunjalo, emsebenzini iVirgo Tiger ayizukuvuyela ukuthatha iiodolo ezivela kubaphathi. Kungenxa yoko le nto unokufumana imisebenzi emininzi ebomini bakhe bonke.
Ukuba uyabathanda abantu asebenza nabo kwaye akaxakwa, lo mfo uya kuba ngumsebenzi obalaseleyo, okrelekrele oza nezimvo ezintsha.
Ngamanye amaxesha unokuthintela ubudlelwane bakhe kuba ucinga kakhulu. Uhlala ekrokrela xa ethandana.
I-Sagittarius Indoda kunye ne-Sagittarius Woman ixesha elide ukuhambelana
Inyoka yomhlaza: Igcisa lokuThintela leZodiac yaseTshayina yeNtshona
Ungamfumana njani umfazi obhinqileyo
Ngaba ii-pisces freaks ebhedini
uphawu lwelanga pisces uphawu lwenyanga sagittarius
uyibuyisa njani indoda yam ye-aquarius
Ilanga kwinyanga yomhlaza kwi-gemini
I-libra yamadoda kubudlelwane